ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းမှာ ၀က်ရူးပြန်ရောဂါကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းမလဲ - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » Latest Health Informations » ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း » မိခင်ကျန်းမာရေး » ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းမှာ ၀က်ရူးပြန်ရောဂါကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းမလဲ
ရေးသားသူ Phyo Wai Yan ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Thurein Hlaing Win.
ကိုယ်ဝန်ရော၊ အတက်ရောဂါပါရှိနေပြီဆိုရင်တော့ ဘာနဲ့မှမတူတဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။
Epilepsy and Pregnancy. http://www.epilepsy.com/information/women/epilepsy-and-pregnancy. Accessed November 20, 2016.
Women, Pregnancy, and Epilepsy. http://www.webmd.com/epilepsy/guide/women-pregnancy-epilepsy. Accessed November 20, 2016.